RASMI: Tababaraha Bayern Munich Oo Iscasilay Saddex Maalmood Kaddib Markii Ay PSG Ku Garaacday Champions League - Laacib
HomeBundesligaRASMI: Tababaraha Bayern Munich Oo Iscasilay Saddex Maalmood Kaddib Markii Ay PSG Ku Garaacday Champions League
April 17, 2021 Abdiwahab Ahmed Bundesliga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Tababaraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Hansi Flick ayaa ku dhawaaqay iscasilaad kaddib markii ay kooxdaasi saddex maalmood ka hor ka hadhay tartanka Champions League oo ay wareegga siddeedda ku garaacday PSG.
Hansi Flick ayaa shaaciyey in uu shaqada kooxda ka tegayo dhamaadka xilli ciyaareedkan, uuna sii hoggaamin doono dhawrka ciyaarood ee ka hadhay dhamaadka horyaalka waddanka Germany ee Bundesliga.
Tababarahan oo Bayern Munich u qaaday Champions League, German Cup iyo Budesliga xilli ciyaareedkii hore oo uu ku cusbaa shaqada kooxda ayaa waxay isku dhaceen agaasimaha ciyaaraha Bavaria ee Hasan Salihamidzic.
Flick ayaa la sheegay in uu ka cadhaysan yahay siyaasadda suuqa kooxda iyo sidii ay u maaraysay xagaagii tegay oo iyagoo ku guuleystay dhamaan tartamada ay haddan xajin waayeen Thiago Alcantara, isla markaana aanay ciyaartooyo cusub lasoo saxeexanin.
Arrin kale oo uu ka cadhooday Hansi Flick ayaa waxay in kooxdu aanay lasoo wareegin ciyaartoy afka hore ah oo beddel u noqda Robert Lewandowski oo dhaawac kaga maqnaa labadii ciyaarood ee PSG, isla markaana ay kooxdiisu weyday ciyaartoy goolasha si fiican ugu dhaliya.
Tababare Hansi Flick oo mar dhoweyd la hadlay warbaahinta kaddib markii ay kooxdiisu 3-2 kaga badisay Wolfsburg ayaa waxa uu shaaciyey in kursigiisu uu bannaan yahay, isla markaana uu shaqada kooxda ka tegayo marka uu soo dhamaado xilli ciyaareedka oo dhawr ciyaarood oo kali ahi ka hadhsan yihiin.
“Maanta ayaan kooxda u sheegay in aan ku wargeliyey kooxda toddobaadkan gudihiisa, in kaddib ciyaartii Paris aan go’aansaday in aan kansalo qandaraaskaygii dhamaadka xilli ciyaareedkan.” Ayuu yidhi Hansi Flick.
Tababare Hansi Flick ayaa la rumaysan yahay in uu noqon doono tababaraha xulka qaranka Germany oo uu beddeli doono Joachim Low oo bisha July ka tegaya shaqadan, kaas oo uu horena ugu soo ahaa gacan-yare koobkii adduunka ee 2014.